shirkan oo uu gudoominayay wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka iyo horumarinta somaliland Md Cali Xusein Ismacil(Cali Shoombe) ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha deegaanka ,biyaha wasiiiru dawlayaasha wasaaradaha maaliyada,biyaha, tamarta,xanaanada xoolaha,shaqada iyo arimaha bulshada ,ururada bulshada iyo qaar kamida agaasimayaasha waaxaha ee wasaarada qorshaynta qaranka.
Ujeedada shirkan ayaa ahayd sidii looga wada tashanlahaa waxyaabaha lagu soo bandhigi doono shirka iskuduwida mucaamida(HLICF) oo dhawaan ka qabsoomi doona magaalada hargaisa.
intii shirkani socday ayaa waxaa lagu soo bandhigay soo jeedino la xidhiiidha sidii looga qayb qaadan laha shirka isku duwida mucaawimada somailland iyo wixii lagu soo bandhigi lahaa.
wasaaradda tamarta iyo macdanta ayaa iyaguna dhankooda soo bandhigay warbixin la xidhiidha qaybta cusub ee tamarta iyo macdanta ,waxaana laysla qaatay in sector laga dhigo tamarta iyo macdanta iyo baahiyaha looqabo
gabagabadii shirkan waxaa soo xidhay wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka iyo horumarinta somaliland mudane cali ismacil huseen(Cali Shoombe)
Xafladan lagu daahfurayey mashruuca tayaynta ilaha dhaqaalaha ee Somaliland oo ka qabsoontay xarunta baanka aduunku ku leeyahay magaalada hargeisa ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka ,wasiiru dawlaha wasaaradda qorshaynta qaranka ,wasiirka wasaaradda ganacsiga, xubno ka socda baanka aduunka,ururada bulshada,baanka dhexe ee Somaliland iyo ururada ganacsatada ee Somaliland.
Ujeedada mashruucan ayaa ah sidii looga caawin lahaa Somaliland caqabadaha maalgashi ee ka hor yimid. hadaba si looga hortago dhibaatooyinka maalgashi ee Somaliland ayaa waxaa si wadajira mashruucan iskaga kaashanaya dawlada Somaliland iyo baanka aduunka .
waxaa lagu soo bandhigay warbixino la xidhiidha sida uu mashruucani u shaqaynayo waxaana kamid ahaa nagiib xaaji oo so bandhigay warbixin laxidhiidha dib u eegista barnaamijka maalgashi ee Somaliland
intii shirkani socday ayaa waxaa dood dheer laga galay sidii uu u shaqayn lahaa mashruucani .
mashruucan waxaa ku bixi doona lacag dhan 3 million oo dollar .
Wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka Somaliland oo ka hadlay u jeedada mashruucan ayaa waxaa uu si faah faahsan uga waramay caqabada ganacsi iyo maalgashi ee ka horyimid Somaliland
Sidoo kale waxaa isna dhankiisa ka waramay Mr suhial Kassim Muhiimada uu mashruucani u leeyahay Somaliland sheegayna inay gacanta ku haynayso dawlada Somaliland isla markaana maamuli doonto
Gabagabadii waxaa si wada jira u furay mashruuca wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka mudane Cali ismacil xuseen jirte(Cali shoombe) iyo mr suhail kassim oo ah hogaamiyaha kooxda shaqada ee baanka aduunka.
Wasiirka wasaaradda qorshayta qaranka Cali ismail jirde (Cali Shoombe) ayaa faah faahin ka bixiyey heshiiskii ay dawladda Somaliland la gashay shirkadda Dubai Port world oo
maamusha dakado badan oo caalamka ka mida heshiiskaas oo ku saabsanaa sidii ay u maal gashan lahaayeen dekada magaalada Berbera ee Somaliland una noqon lahayd marso caalami ah ayaa waxa ka mid ahaa hadaladii wasiirka “ shirkadda Dubai Port world waxay maamushaa 7500 oo shirkadood waxaana suurto gal ah inay shirkadahaasi ku soo xidhmaan dekedda magaalada berbera dhaqaalena ku soo kordhiyaan guud ahaan dalka Somaliland sidoo kale waxa uu wasiirku ka hadlay siyaabo khaldan oo loo turjumay heshiiska lalagalay shirkada dubai Port world waxaanu yidhi waxaan filayaa lababoqol oo sanno ayaa laga jooga markii la yidhi berberi wax g’o lagu qaado ka wayn laakiin waa loomeel dayayaa umadda in loo daneeyo oo wixii wax ugu hagaagayaan loo sameeyo dawladdu masuul ayay ka tahay, waxa kale oo wasiirku ka dhawaajiyay heshiiskii ay dawladda Somaliland lasoo sexeexatay dawladda Ethopia ee ku saabsanaa isticmaalka Dekeda Berbera waxaanu yidhi waa heshiis aan waxba u dhimayn oo kaabaya,heshiiskaa laftiisa ayay ku jirtay in la balaadhiyo dekeda berbera si ay u isticmaali karaan dawladda Ethopia iyo sayladaha kale ee caalamkuba dhaqaaleheenana aynu hore ugu marino waxaanu wasiirku kusoo afmeeray shirkaa jaraaid heshiiskani inuu yahay mid muhiim u ah danta umadda reer Somaliland iyo sidii ay u horu mari lahaayeen.
Soddonkii sano ee u danbeeyay waxa ka jiray deegaanada biyadhaca Sare ee Maroodijeex carro guur daran. Maadaama oo bulshooyinka ku dhaqan deegaankan ay gabi ahaanba ku tiirsan yihiin waxsoosaarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha, kheyraadkii dabiiciga ahaa ee ay helijireen oo siiyaraaday waxa uu saamayn toos ah ku yeeshay nolosha qoysas badan iyada oo ay adkaatay in ay si fudud dib uga soo kabtaan. Hadaba Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) waxa uu maalgelinayaa mashruuca dhaqaalaynta ciidda iyo biyaha oo ka socda deegaanka Aburriin ee gobolka Maroodijeex, waxana fulinaysa Wasaaradda Beeraha Somaliland. Mashruucu waxa uu ka kooban yahay qaybo badan oo ay ka mid yihiin dayactirka goobaha biyaha sida balliyada iyo berkadaha, daryeelka deegaanka iyo dhaqaalaynta ciidda iyada oo la hirgelinayo farsamooyin casriya oo ah dhisidda naxarro kala duwan si ay u qabtaan biyaha una hakiyaan qulqulkooda iyo weliba joojinta samaysanka jeexjeexyada iyo fididda dooxyada iyada oo la dhigayo gabyanno laku hakinayo ciidda iyo fididda dooxyada.
Dhanka kalena mashruucu waxa uu kor u qaadayaa aqoonta beeralayda ee ku aaddan beerashada casriga ah iyada oo dhowaanna la bilaabay dib u dhiska iyo dayactirka dugsiga barashada beeraha ee Aburiin.
Waqtigan oo roobab fiicani ka da’een deegaanka, waxa durba la dareemayaa faa’idooyinka mashruuca oo ay ugu horrayso buuxinta baahidii biyaha iyada oo biyuhu fadhiyaan balliyadii iyo berkadihii la hirgeliyay. Sidoo kale carro guurkii darnaa iyo qulqulkii biyaha ayaa la dareemayaa sida loo hakiyay, iyada oo biyihii fadhiisteen dhulkii wax ka soo bixi lahaayeen oo ku hakadeen.
Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee (SDF) waa deeq lacageed oo logu taageero dawladda Somaliland si ay fuliso barnaamijyo kor loogu qaadayo Horumarinta Somaliland kuwaas oo waafaqsan Qorshaha Horumarinta Qaranka.
Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee (SDF) waxaa maalgeintiisa iska kaashaday dalalka Ingiriiska, Denmark, Norway iyo Netherlands.
Dib u dhiska Waddada isku xidha Kalabaydh illaa Dilla
Wakaaladda Horumarinta Waddooyinka Somaliland oo maalgelin ka helaysa Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) waxay dib u dhis ku samaysay 19 Km oo ah waddada isku xidha magaalooyinka Kalabaydh iyo Dila taas oo hadda geba gebo ku dhow, waxana la dhisay in kabadan 17 Km inta hadhayna la filayo in bisha May la dhamaystiro.
Faai’dooyinka waddadani keentay waxa ka mid ah wakhtigii isu’socodka gaadiidka ee magaalooyinka ay isku xidho waddadani oo gaabtay, kharashaadkii ku bixi jiray dayactirka gaadiidka oo yaraaday, iyo shilalkii oo hoos u dhacay, halka ay fududaatay gudbinta adeegyada dawladdu bixiso.
Mashruucu sidoo kale waxa la rajaynayaa in uu wax ka tari doono koboca dhaqaalaha goobaha ay waddadani marto, isaga oo hoos u dhigidoona heerka saboolnimada ee bulshooyinka deggen waddadan hareeraheeda.
Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee (SDF) waa deeq lacageed oo logu taageero dawladda Somaliland si ay u fuliso barnaamijyo kor loogu qaadayo Horumarinta Somaliland kuwaas oo waafaqsan Qorshaha Horumarinta Qaranka. Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee (SDF) waxaa maalgeintiisa iska kaashaday dalalka Ingiriiska, Denmark, Norway iyo Netherlands.
Mashruuca Biyo Ballaadhinta Caasimadda Hargeysa
Wasaaradda beeraha oo tababar soconaya mudo 18 bilood ah u qabatay shaqaalaha cusub ee Wasaaradda
Shir Lagaga Tashanaayo Nidaamka Biyo Balaadhinta Magaalada Berbera oo lagu qabtey Berbera